५ बर्ष अघि डाक्टर पढ्न पठाएको छोरीलाई विमानस्थल लिन पुगेकी आमाले जब जिउँदो होइन शव सम्म देख्न पाइनन् ! आफ्नैले नचिनेर उनको घडी र नङ–पोलिसका कारण परिवारले शरीर उनको भएको दाबी गरे « Chautari Online
५ बर्ष अघि डाक्टर पढ्न पठाएको छोरीलाई विमानस्थल लिन पुगेकी आमाले जब जिउँदो होइन शव सम्म देख्न पाइनन् ! आफ्नैले नचिनेर उनको घडी र नङ–पोलिसका कारण परिवारले शरीर उनको भएको दाबी गरे
काठमाडौं– ललितपुरस्थित लुभू–८ का राजकुमार महर्जनले आफ्नी छोरीलाई डाक्टर बनाउन ५ वर्षअगाडि बंगलादेश पठाएका थिए। उनी छोरीको पढाइलाई लिएर औधी खुसी पनि थिए।
तर, बंगलादेशमा एमबिबिएसको परीक्षा दिएर सोमबार युएस–बांग्ला विमानबाट घर फर्किने क्रममा महर्जनकी छोरी मिली महर्जन पनि दुर्घटनामा परिन्। आफ्नी छोरीलाई डाक्टरहरूले लगाउने ‘एप्रोन’ मा हेर्ने सपना बोकेका उनै महर्जन छोरीको अनुहार हेर्न तड्पिएका थिए।सोमबार दिउँसो २ बजेर १८ मिनेटमा खराब ल्यान्डिङका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा बंगलादेशी विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। जुन घटनामा ४९ जनाको निधन भइसकेको छ।
ढाकाबाट उडेको युएस–बंग्ला विमानमा ६७ यात्रु र ४ चालक दलसहित ७१ जनाले यात्रा गरिरहेका थिए। सोमबार करिब साढे २ बजेदेखि महर्जन परिवार मिलीको मृत शरीर खोजिरहेको छ। तर, उनीहरूले भेट्न सकेका छैनन्।
उनीहरू मिलीलाई खोज्न पहिले विमानस्थल पुगेका थिए। त्यहाँबाट परिवारलाई उनको शरीर काठमाडौं मेडिकल कलेज पठाएको उत्तर आयो। यसपछि अत्तालिएका आफन्तहरू अस्पताल पुगेका थिए। त्यहाँ पनि कुनै सूचना नपाएपछि उनीहरू महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पताल पुगेका थिए। यहाँबाट पनि कुनै सूचना पाउन नसकेपछि उनीहरू फेरि त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै काठमाडौं मेडिकल कलेज पुगेका थिए।राति ९ बजे फेरि टिचिङ फर्किएका मिलीका ठूला बुवा पूर्ण महर्जनले भने, ‘घटना थाहा पाएपछि हामी यत्तिकै दौडिरहेका छौं। तर, केही जानकारी पाएका छैनौं।’ उनीहरूले राति १० बजेतिर मात्र थाहा पाए, मिलीको निधनको सम्बन्धमा।
विमान दुर्घटनामा मर्नेमध्ये ४० भन्दा बढीको शरीर जलेर क्षतविक्षत छ। कत्तिको अनुहार डरेर चिन्न नसकिने अवस्थामा छढाकाबाटै एमबिबिएसको परीक्षा दिएर फर्किएकी काठमाडौं सुकेधाराकी चारु बरालको मृत शरीर पनि चिन्न परिवारलाई हम्मे परेको थियो। उनको घडी र नङ–पोलिसका कारण परिवारले शरीर उनको भएको दाबी गरेका थिए।दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको पोस्टमार्टम टिचिङ अस्पतालमा आजै हुँदैछ।